सर्वत्र चासोको ‘खुवालुङ’ः फुटाउनुभन्दा संरक्षण गर्दा फाइदा !
इटहरीः अहिले सामाजिक सञ्जाल, मुलधारका सञ्चार माध्यमहरु र मोफसलका सञ्चार माध्यममा चर्चामा रहेको ठाउँ, धरोहर, प्रकृतिको उपहार हो ‘खुवालुङ’ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयअगाडि आफूनिकट नेकपाले २०७७ साल फागुन ८ गते विराटनगरमा गरेको प्रदेश १ स्तरीय आमसभामा यसको विषयमा धारणा राखेपछि एकाएक ‘खुवालुङ’ चर्चामा आएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘आफूले जहाज ल्याउने भन्दा खिल्ली उडाउनेहरु कोसीमा गएर हेरे हुन्छ । त्यहाँ जहाज छ । एकैछिनमा चताराबाट भोजपुर पुग्न सकिन्छ । अहिले त्यहाँ एउटा ढुङ्गोले गर्दा जहाजलाई अप्ठ्यारो भएछ । त्यो फुटाउनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
किराँतीहरुको आस्थाको धरोहरको रुपमा रहेको खुवालुङबारे प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि किराँतीहरु रुष्ट भएका थिए । त्यही समयबाट चर्चामा आएको धार्मिक क्षेत्र हो ‘खुवालुङ’ । अहिले यसको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो फुटाउन नहुने, जहाजको लागि अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने र यसलाई धार्मिक पर्यटनको क्षेत्र बनाउनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।
के हो ‘खुवालुङ’ ?
किराँतीहरु ‘खुवालुङ’ (पानी ढुङ्गा) लाई आफ्नो उत्पतिको थलो मान्छन् । यहीँबाट किराँतीहरुको उदय भएको उनीहरुको भनाइ छ । यही क्षेत्रबाट किराँतीहरु कालान्तरमा पूर्व मेचिदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको किराँतीहरु बताउँछन् । किराँत धर्मावलम्बीहरुको धार्मिक ग्रन्थ ‘मुन्धुम’मा पनि यसको बारेमा चर्चा भएको किराँतीहरुको भनाइ छ । यसै ठाउँबाट किराँतीहरु दुधकोसी हुँदै पश्चिमतर्फ लागेको भनिन्छ् । यस्तै अरुण र तमोर हुँदै पूर्वी पहाडी तथा हिमाली भेगमा किराँतीहरु गएका भन्ने किम्बदन्तिहरु छन् । त्यसैगरी, सप्तकोसी हुँदै तराईमा किराँतीहरु गएका हुन् ।
यस ऐतिहासिक ‘खुवालुङ’ त्रिवेणीमा पर्दछ । यसै ठाउँबाट सप्तकोसीले आफ्नो रुप धारण गरेको छ । यहाँ आएपछि दुधकोसी, अरुण र तमोर मिलेर सप्तकोसीले आफ्नो विशाल रुप धारण गरेको छ । यसका साथै ‘खुवालुङ’मा नै प्रदेश १ का तीन पहाडी जिल्ला धनकुटा, भोजपुर र उदयपुरको पनि संगम विन्दु हो ।
विवाद कसरी उत्पन्न भयो ?
अहिले सप्तकोसीमा विभिन्न क्षमताका जेटबोट सञ्चालनमा छन् । कुनैले १० जना यात्रु बोक्न सक्छन् त कुनैले ७० देखि १०० जनासम्म यात्रु बोक्न सक्छन् । सुनसरीको चतराबाट भोजपुरको हतुवागढीसम्म जाने जलमार्गको त्रिवेणीमा ‘खुवालुङ’ रहेको छ । चतराबाट जहाजमा करिव १० देखि ११ मिनेटको दूरी पार गरेपछि ‘खुवालुङ’ पुगिन्छ । स–साना जहाज सजिलैसँग यहाँबाट गएपनि ‘खुवालुङ’ले गर्दा धेरै यात्रुवाहक क्षमता भएका जहाज भने जान सक्दैनन् । सञ्चालनमा रहेका जहाजमा पनि ‘खुवालुङ’ले क्षति पुर्याउने गरेको व्यवसायीले बताउने गरेका छन् । यही कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्रीले यसलाई फुटाउने अभिव्यक्ति दिएका हुन् । अनि त्यही दिनबाट यसको विवाद सुरु भएको हो । स्थानीयलाई जानकारी नै नगराई ‘खुवालुङ’ फुटाउन स्काभेटर ल्याएपछि आफूले विरोध गरेको स्थानीय लालबहादुर राई बताउँछन् ।
‘योचाहीँ यहाँका स्थानीयलार्ई थाहा नै नदिई उहाँहरुले माथि माथि कसरी कुरा मिलाउनुभयो । हामीलाई थाहा नै नभइ उहाँहरुले यहाँ मेसिन ल्याएर खन्ने कुरा गर्नुभयो । हामीलाई कति पनि थाहा थिएन । उहाँहरुले मेसिन पनि ल्याउनुभएको थियो’, राईले भने । यहाँका स्थानीयलाई जानकारी नै नगराई ब्रेकरसहित स्काभेटर ल्याएपछि चकित परेको राई बताउँछन् । बिनाजानकारी ‘खुवालुङ’ भत्काउन स्काभेटर ल्याएको थाहा पाएपछि दुई दिन स्थानीयले रोकेर फर्काइदिएको उनी बताउँछन् । पहिला आफूलाई यसबारे थाहा नभएको तर, अहिले यसको महत्व बुझेकाले कुनै पनि हालतमा फुटाउन नदिने उनको भनाइ छ । यद्धपि, फुटाउने प्रयास यो पहिलो नभएको उनले जानकारी दिए । ‘पहिला पनि उहाँहरुले हामीलाई जानकारी नगराई मेसिन ‘ल्यार’ खनाउनु भएको थियो । अहिले पनि त्यस्तै सोचेर, फेरी त्यही गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर उहाँहरुले मेसिन ल्याउनुभयो । तर, उहाँहरुको सोचलाई हामीले ‘सक्सेस’ हुन दिएनौँ’, उनले भने । ‘खुवालुङ’को विषयमा भइरहेको विवाद जेटवोट सञ्चालक व्यवसायिहरुको एकल स्वार्थ भएको ‘खुवालुङ क्षेत्र संरक्षण समिति’ का सदस्य दिनेश काम्दुङ राईको आरोप छ ।
‘अहिले देखिएको विवादचाहीँ सिधा भन्नुपर्दा यहाँ बोट सञ्चालक व्यवसायीको स्वार्थका कारण देखिएको हो । यहाँ जेटबोट सञ्चालन गर्ने व्यवसायीले, बोट सञ्चालन गर्दा ‘खुवालुङ’ले अप्ठ्यारो परेको गुनासो राज्यसँग राखेपछि राज्यले त्यो सम्बोधन गर्नतर्फ लाग्यो । तर, यसको ऐतिहासिक महत्व के छ भनेर यहाँका स्थानीय, सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी यो ‘खुवालुङ’ फुटाउने योजना बनाएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो’, उनले भने । सरकारको यो कदमप्रति संसारभर छरिएर रहेका किराँती समुदायमा चासो बढेको उनले बताए ।
‘खुवालुङ’को विषय बहसको क्षेत्र बनेपछि सरकारले पनि आफ्नो कदम हटाउने संकेत देखिएको छ । अहिले सबै पक्षसँगै जेटबोट चलाउने व्यवसायीले पनि यसबारे मनन गर्ने भनेपछि सरकारको ध्यानाकर्षण भएको पाइएको छ । व्यवसायी पनि ‘खुवालुङ’लाई जोगाएर वैकल्पिक जलमार्ग सरकारले निर्माण गर्न सके आफूहरु त्यसको विनाशमा नलाग्ने बताउँछन् । ‘हामीले ‘खुवालुङ’ फुटाउनुपर्छ नै भनेका छैनौँ । हामीलाई सरकारले त्यसको वारिपारिबाट खोला बनाइदिए त्यसको संरक्षणमा पनि हामी लाग्छौँ ।
यसले त हाम्रै व्यवसाय बढ्छ । यसलाई हेर्न मान्छेहरु आउनुहुन्छ । यसको संरक्षणमा त हामी पनि जोड दिन्छौँ । हाम्रो माग के हो भने, सरकारले हामीलाई वैकल्पिक बाटो बनाइदिनुपर्यो’, कोसीमा जेटबोट सञ्चालन गर्दै आएका एक व्यवसायीले भने । विवादबाट चर्चामा आएको ‘खुवालुङ’ हेर्न आउने पर्यटकका कारण आफूहरुलाई फाइदा पुगिरहेको ती व्यवसायीको भनाइ छ । यसको संरक्षण भए अझ पर्यटक बढ्न उनको विश्वास रहेको छ । अहिले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि यसको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिन थालेका छन् । उनले व्यवसायीको माग र किराँतीहरुको सभ्यताको थलो दुवैलाई मिलाएर लैजाने संकेत गरेका छन् ।
राजनैतिक दलको चासो
यसका साथै राजनैतिक दलले पनि यस विषयमा चासो देखाउन थालेका छन् । सर्वत्र चर्चा र चासो बढेपछि ‘खुवालुङ’को विषयमा प्रदेश १ का प्रमुख दलका नेताहरुले छलफल नै गरेका थिए । छलफलमा खुवालुङ फुटाउनेभन्दा जेटबोटको लागि विकल्प खेजे सबैलाई फाइदा हुने निचोड निस्कियो । सोही बमोजिम सरकारलाई उनीहरुले आग्रह पनि गरे । उनीहरुले ‘खुवालुङ फुटाउनुभन्दा यसको दायाँबाँयाबाट वैकल्पिक जलमार्ग निर्माण गर्न’ सुझाए ।
छलफलपछि प्रदेश १ का पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्म्बोसहित विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरुले स्थलगत रुपमा खुवालुङको अनुगमन गरेका थिए । पूर्वमन्त्री इन्द्र आङ्म्बोले खुवालुङ मास्ने सरकारको नीति नै गलत भएको बताए । ‘जल यातायातको विकास गर्ने एक मात्र उद्देश्यका साथ किराँतीहरूको आस्थाको धरोहर खुवालुङ मास्ने सरकारी नीति गलत छ । खुवालुङ संरक्षण गरेर पनि जल यातायात चलाउन सकिन्छ । यसबारे राज्य गम्भीर बन्नुपर्ने खाँचो छ’, पूर्वमन्त्री आङम्बोले भने । सरकारले प्राविधिक अध्ययन गरेरै यसको विकल्प खोज्नपर्ने उनको सुझाव छ ।
संरक्षण भए प्रशस्त सम्भावना
यसको संरक्षण गर्न सके सर्वत्र फाइदा हुने देखिन्छ । अरुलाई भन्दा पनि सुरुमा ‘खुवालुङ’ फुटाउनुपर्छ भनेर सरकारसँग माग राख्ने जेटबोट सञ्चालक व्यवसायीलाई नै सबैभन्दा बढी लाभ हुने देखिन्छ । यसबारे थाहा नै नहुँदा भोजपुरबाट सुनसरी र सुनसरीबाट भोजपुर जाने यात्रु मात्र यहाँ आउने गर्थे । जसले गर्दा एउटा जहाजमा यात्रु भरिन घण्टौँ लाग्थ्यो । अहिले ‘खुवालुङ’ हेर्नकै लागि आउने पर्यटकको संख्या अन्यको तुलनामा दोबर रहेको व्यवसायीहरु नै बताउँछन् । उनीहरु पनि वैकल्पिक मार्गकै निचोडमा पुगेका छन् । यसका साथै अहिले पर्यटक ‘खुवालुङ’ हेर्नकै लागि आउन थालेपछि यहाँ आसपासमा पसलहरु पनि सञ्चालनमा आउन थालेका छन् ।